Ibu Ibu | October 2021
Isi > Ibu Ibu
ọnwụ ọnwụ afọ ọhụrụ
Arọ ọnwụ afọ ọhụrụ mkpebi - a ngwọta
Kedu ka m ga-esi mee mkpebi afọ ọhụrụ m ka ifelata? 7 tozọ arapara n'ibu gị arọ Loss New Year Mkpebi Nyochaa gị usoro iheomume. Ingghọta ebum n’uche gị na ihe ọ ga-ewe iji ruo ebe ahụ nwere ike bụrụ oge ọgụ. Chọta Obodo Kwadoro. Amp Gị H2O. 4. # Na-emeso Onwe Gị. Nọrọ n'ọrụ. Adala mba.
emonda sl6 ibu
Emonda sl6 ibu - ihe ga-ekwe omume
Ego ole ka njem Emonda dị arọ? 698 gram
nri ụtụtụ ka ị ghara ibu ibu
Nri ụtụtụ iji ghara ibu ibu - ihe ngwọta
Kedu nri ndị na - enyere aka gbaa abụba afọ? Mana enwere ọtụtụ nri dị mma maka uto gị na eriri gị. Ha ga - enyere gị aka ịlụso abụba afọ ọgụ. Mkpụrụ ahụ na-ebu milligrams 422 nke potassium, mineral nke nwere ike inye aka belata oke nke sodium na-aza aza na ahụ gị. Berry. Mmiri ara ehi chọkọletị. Green Tea. Citrus. Mkpụrụ osisi dum. 17. 2011.
mkpụmkpụ ibuli mgbatị
Mgbatị dị elu na-ebuli elu - azịza na ajụjụ
Nwere ike ịmepụta akwara na mgbatị dị mkpụmkpụ? Worrụ ọrụ dị mkpirikpi bụ nhọrọ dị mma ụbọchị mgbe ịchọrọ ilekwasị anya na cardio, mana ịchọrọ ịgbakwunye usoro mgbapụta akwara ngwa ngwa n'oge gị. Rụpụta ahụ ike: Maka ogwe aka ma ọ bụ mpịakọta buru ibu ị ga-arụ ọrụ karịa 10 nkeji kwa ụbọchị. Maka mmụọ nsọ lelee ihe omume kachasị mma maka otu ahụ.
mbụ ihe ịrịba ama nke ifelata
Ihe ịrịba ama mbụ nke ifelata - ịza ajụjụ
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe gị iji hụ ọnwụ ọnwụ? Ọnwụ dị oke mkpa na uru ahụ ga-ewe ihe dị ka izu asatọ iji hụ, agbanyeghị, ọbụlagodi na ị naghị ahụ nkọwapụta ahụ, uru ndị na-aga n'ahụ na uche gị dị oke mkpa. Uwe gị ga-adaba nke ọma, ọnọdụ gị ga-aka mma ma ị ga-eje ogologo, Sharp na-ekwu.
na-aga ime ụlọ ịwụ na-enyere aka idalata
Goingga ụlọ ịsa ahụ na-enyere aka ịkwụsị ibu - ajụjụ na azịza edepụtara
I kwesiri itule onwe gi tupu ma obu mgbe ozo? Yabụ ọ nwere ike ịbụ na ị maralarịrị na ọ kachasị mma ịtụle ihe mbụ n'ụtụtụ tupu ị rie ma ọ bụ jiri ụlọ ịsa ahụ mee ihe, ịkwesịrị ịgbakwunye otu ọnụọgụ na ndepụta ahụ: tupu ịsa ahụ. 18.04.2019
eme amino acid na-eme ka ibuo gi ibu
Amino acids na - eme gị ka ị rituo?
Amino acid ga - akpata uru ibu? E bipụtara taa Nature Metabolism, nyocha ohuru nke ndị mmụta sitere na Mahadum Sydney nke Charles Perkins Center, Prọfesọ Stephen Simpson na Dr Samantha Solon-Biet, na-atụ aro na ka ha na-eweta uru uru ụlọ, ị consumptionụ oke amino acid (BCAAs) nwere ike belata afọ ndụ,
ebuli elu maka ndị na-agba ígwè
Ibu ibu maka ndi na-agba kẹkẹ - otu esi edozi
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị iburu ibu? Ma ọzụzụ dị arọ nwere ike ime ka arụmọrụ igwe gị dịkwuo mma. Mgbapu igwe adịghị mma maka naanị ịnya ma ịgba. Iweli ibu na-enyere aka ijigide olu ike ka ị na-aka nká ka ị nwee ike ịgba ọsọ ọsọ ma sie ike karịa afọ. 8. 2017.
oke ibu uci
Uci ibu oke - esi edozi
Gini mere enwere oke ibu UCI? Ọ na-ezo aka na kilogram 6.8 nke kachasị dị ntakịrị nke UCI setịpụrụ nke na-egbochi igwe kwụ otu ebe niile eji asọmpi na ibu a. E guzobere iwu a na 2000 dị ka ụzọ iji hụ na ndị nrụpụta anaghị eme ka usoro nke igwe kwụ otu ebe guzosie ike ka otu egwuregwu wee nwee asọmpi na igwe ndị yiri ya.
uci bike ibu ịgba
Uci bike ibu ịgba - viable ngwọta
Kedu ihe kpatara UCI 6.8 n'arọ? Ọ na-ezo aka na kilogram 6.8 nke kachasị dị ntakịrị nke UCI setịpụrụ nke na-egbochi igwe kwụ otu ebe niile eji asọmpi na ibu a. E guzobere iwu a na 2000 dị ka ụzọ iji hụ na ndị nrụpụta anaghị eme ka usoro nke igwe kwụ otu ebe guzosie ike ka otu egwuregwu wee nwee asọmpi na igwe ndị yiri ya.
bob mpịakọta arọ ọnwụ
Bob mpịakọta ibu ọnwụ - ihe ngwọta bara uru
Bob Roll nwere kansa? Ọ na-enwe ụzọ siri ike na ọrịa kansa pancreatic, mana o kpebiri idozi ya ma kpuchie racethat a Tour de France biker maka gị. 24. 2009.
cyclist nri ka ifelata
Cyclist nri ka ị ghara ibu ibu - chọọ ihe ngwọta
Kedu ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-esi felata? Kedu ka ndị na-agba ígwè pro ga-esi felata? Ọtụtụ uru na-eji nlezianya gụọ calorie ma tụọ nri iji hụ na ha na-eri mmanụ ha chọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma na ọzụzụ na ịgba ọsọ. Otu ihe a na-ahụ kwa ụbọchị bụ iri nri ụtụtụ kwesịrị ekwesị, jiri nri ike wee rie nri ehihie wee rie nri mbụ. 05.09.2016
pụrụ iche tarmac comp ibu
Pụrụ iche tarmac mkpokọta ibu - arụ ọrụ ngwọta
Ego ole ka ebu tarmac pụrụ iche? Obere ngbagide imegide, njigide dị egwu, na njigide dị na taya nke ejiri aka mee nke na-ebu naanị gram 220 na atụmatụ BlackBelt.
irè ọnwụ ọnwụ atụmatụ
Irè ọnwụ ọnwụ ndụmọdụ - nzaghachi maka nsogbu a
Kedu ka m ga-esi felata n’abalị asaa n’ụlọ? Soro Anyị Gụnye mmemme aerobic na usoro ị na-eme kwa ụbọchị. Y’oburu n’ichoo oku ka o gbaa osiso, odighi aghagharia iku azu. Belata carbs a nụchara anụcha. Tinye azu azu na nri gi. Bido ụbọchị na nri ụtụtụ protein dị elu. Nụọ mmiri zuru ezu. Belata oke nri nnu. Na-eri eriri soluble. 4. 2019.
ọnụọgụ ọnwụ nke kansa
Ọnwụ ọnwụ ọnwụ - otu esi edozi
Kedu ụdị ọrịa kansa na-ebute ọnwụ? Dị ka American Cancer Society si kwuo, ọnwụ ọnwụ a na-akọwaghị bụkarị ihe mgbaàmà mbụ pụtara ìhè nke ọrịa cancer nke akpịrị, pancreas, afọ, na akpa ume. Ọrịa ndị ọzọ, dị ka ọrịa cancer nke ovarian, na-ebute oke ibu ma ọ bụrụ na etuto etolite buru ibu iji pịa afọ.
Ihe oriri 5 ị gaghị eri eri maka ọnwụ
Nri 5 ị na - ekwesịghị iri maka ụkọ ọnwụ - kedu ka ị si ekpebi
Kedu nri 5 ị na-ekwesịghị iri? Nke a bụ nri iri abụọ nke anaghị adịkarị mma n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị nwere ike iri ha n'oge na-adịghị mma n'oge pụrụ iche na-agaghị emerụ ahụ ike ha oge niile. Ọtụtụ pizzas. Achịcha ọcha. Kasị mkpụrụ osisi juices. Mkpụrụ ọka ụtụtụ dị ụtọ. E ghere eghe, ghere eghe, ma ọ bụ sie nri egheere eghe. Achịcha, kuki, na achịcha.
sonya eddy ibu ibu
Sonya eddy arọ ọnwụ - olee otu ị ga-esi dozie
Sonya Eddy ọ nwere ọrịa shuga? Onye na-eme ihe nkiri bụ Sonya Eddy gosipụtara ya kemgbe mmalite ndị a mara na Machị 3, 2006. Epiphany abụrụla onye isi nọọsụ na General Hospital kemgbe mbido agwa ahụ. E kpughere na Epiphany chọpụtara ụdị ọrịa shuga nke abụọ na 2016.
nkịtị ụbụrụ ụbụrụ
Nkịtị ibu nke ụbụrụ - nkịtị ajụjụ
Kedu ihe ibu arọ nke ụbụrụ mmadụ na KG? Humanbụrụ mmadụ toro eto na-atụle ihe dịka kilogram 1.5 (3.3 lb). N'ime ụmụ nwoke, ịdị arọ dị ihe dịka 1370 g na ụmụ nwanyị banyere 1200 g.
agụụ na-afụ ụfụ ghrelin ibu ọnwụ na mmezi
Agụụ na-egbu mgbu ghrelin ọnwụ na mmezi - otu esi edozi
Ghrelin na-eme ka agụụ na-agụ gị ma ọ bụ na-eme ka afọ ju gị? Ghrelin bụ homonụ nke emepụtara ma wepụta tumadi site na afọ ya na obere obere nke eriri afọ, pancreas na ụbụrụ wepụtara. Ghrelin nwere ọtụtụ ọrụ. A na-akpọ ya 'hormone agụụ' n'ihi na ọ na-akpali agụụ, na-abawanye nri ma na-akwalite nchekwa abụba.
na-ewepu mmiri ara ehi na-enyere gị aka idalata
Ndi iwepu mmiri ara ehi na enyere gi aka idalata - otu esi edozi
Kedu ihe kpatara mmiri ara ehi ji dị njọ maka ifelata? Mmiri ara ehi na-akwalite ọnwụ. Nnyocha na-egosi na ndị nwere erughị eru na calcium nwere nnukwu abụba ma na-enwe obere njikwa nke agụụ ha.